अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने नीतिले शेयर बजारलाई धक्का - Aarthiknews
अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने नीतिले शेयर बजारलाई धक्का
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा नयाँ विषय बहसमा आएको छ । त्यो हो, बाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र (डिभेन्चर) जारी गर्नुपर्ने । ऋणपत्र जारी सम्बन्धमा जति चर्चा हुनुपथ्र्याे त्यति मात्रामा हुन सकेको देखिंँदैन । यो नीति लागू हुन के कस्तो वातावरण आवश्यक छ भन्नेसम्मको बहसबिना नै यस्तो नीति अगाडि बढाइएको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन यसले शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने खालका विश्लेषण पनि अत्यन्तै थोरै र सतही ढंगले आएको देखियो । यही पृष्ठभूमिमा इक्युटी मार्केट (शेयर बजार) र डेप्थ मार्केट (ऋण बजार) माथि थप चर्चाको आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णयलाई सहीसिद्ध गर्ने चुनौतीका साथै सकारात्मक उद्देश्यबाट प्रेरित त होला तर त्यसलाई राम्रो कामको शुरुवातको रुपमा प्रमाणित गर्न चाहिँ गाहा्रे छ । यसो किन भनिएको हो भने अब आम लगानीकर्ताले बैंक र वित्तीय संस्थामार्फत ऋणपत्र खरिद गर्न सक्छन्, जुन नराम्रो हुँदै होइन । विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो अभ्यास देखिन्छ । यो विषयमा बुझ्नैपर्ने कुरा के पनि हो भने बैंकले मात्र होइन कुनै एक निजी कम्पनीले पनि ऋणपत्र जारी गर्न सक्छ । यहाँ अहिले उठेको प्रश्न यो हो कि शेयर बजार र ऋण बजारमध्ये किन राष्ट्र बैंकको रोजाइमा ऋण बजार पर्यो ? भन्ने हो ।
यहाँ रोचक कुरा के छ भने आजको मितिमा पनि नेपालमा आकारको मात्र तुलना गर्ने हो भने ऋणपत्र बजार शेयर बजारभन्दा ठूलो छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ कै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि सरकारले आन्तरिक ऋणको लागि ६२ अर्ब रूपयाँको ऋणपत्र जारी गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पनि १ खर्ब ७ अर्बको बोन्ड जारी गरेको थियो । उता, प्राथमिक बजारमा पुँजी परिचालनको आकार हेर्ने हो भने २०७५÷०७६ को प्रथम ८ महिनामा २२ अर्ब मात्र देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिले अघि बढाएको प्रावधानलाई यसरी मात्र बुझे पनि हुन्छ कि सरकारले ऋणपत्रको दायर (क्षेत्र) बढाएको मात्र हो । अहिलेसम्म संस्थागत लगानीकर्ताले मात्र चासो देखाइरहेको र लगानी गरेकोमा अब सर्वसाधारणले समेत लगानी गरुन् भन्ने सरकारको उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
अहिलेसम्मका खरिदकर्ता रहेका बैंकले अब आफैं ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्यको हिस्सा लगभग १० प्रतिशतको मात्र देखिन्छ । केही अहँम् प्रश्नहरु अब देखा पर्ने समस्या यो हो कि बाणिज्य बैकहरुले जारी गर्ने ऋणपत्रको खरिदकर्ता को हुने ? ऋणपत्र क्रेताको अभाव हुन्छ भन्न यसकारण पनि सकिन्छ कि यो सालको बजेटमा सरकारले करिब १ खर्व ९५ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेकोछ ।
त्यसैगरी प्रदेश न. २ ले एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । उता प्रदेश न. ४ ले ९८ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले समेत ७५ करोड आन्तरिक ऋणमार्फत पुँजी संकलन बताएको छ । आखिर सबैले ऋणको लागि खोज्ने बजार त यही नै हो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको निर्देशनअनुसार अब २८ वटा बैंकले प्रतिबैंक कम्तिमा २ अर्बको दरले ५६ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्नैपर्यो । यसरी हेर्दा बजारमा ऋणपत्रको ठुलो बाढी आउंदैछ । महत्वपूर्ण कुरा, यो मात्रामा ऋणपत्र किन्न सक्ने पुँजी आपूर्तिको स्रोत के हो ? बजारमा यो आकारको ऋणपत्र खरिद गर्नसक्ने खरिदकर्ता छन् कि छैनन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको त अन्डरराइट (प्रत्याभूति) को अधिकार राख्छ ।
त्यसैले यदी सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र बिक्री भएन भने राष्ट्र बैंकले खरिद गर्छ । यहाँ के प्रश्न उठेको छ भने यदी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र बिक्री भएन भने त्यो कसले किन्छ ? बाणिज्य बैंकको ऋणपत्र पनि अन्डरसब्स्क्राइब् (बिक्री भएन) भयो भने त्यो कसले किनिदिन्छ ? यस्तो अवस्थामा बाणिज्य बैंकले अनिवार्य पुँजीको २५ प्रतिशतको ऋणपत्र बिक्री गर्नैपर्ने प्रावधान कसरी लागू हुन्छ ? आखिर लगानीकर्ताले बाणिज्य बैंकलाई भन्दा त सरकारलाई नै हो विश्वास गर्ने ।